पहिलाको जस्तो सहज अवस्था छैन, ७५ प्रतिशत रेमिटेन्स घटेको छ - Wnepal.com
सुमन पोखरेल , अध्यक्ष, नेपाल रेमिटेन्स एसोसियसन एवं सीइओ, इन्टरनेशनल मनि एक्सप्रेस
बुबा दुर्गाप्रसाद उपाध्याय पोखरेल र आमा इन्दिरा पोखरेलबाट २०३५ सालमा जन्मिएका सुमन पोखरेल हाल नेपालकै नम्बर एक रेमिटान्स कम्पनी इन्टरनेशनल मनि एक्सप्रेस(आइएमई)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ)को रुपमा कार्यरत छन् । उनी रेमिटेन्स् कम्पनीहरुको छाता संस्था नेपाल रेमिटेन्स एसोसियसन (एनआरए)का अध्यक्ष पनि हुन् ।
नेपालमा औपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिने रेमिटान्समध्ये करिब ५० प्रतिशत हिस्सा आइएमईबाटै आउने गर्छ । यति ठूलो रेमिटान्स कम्पनीलाई कुशलतापूर्वक संचालन गरिरहेका पोखरेलले सन् २००३ देखि बैंकबाट करिअर सुरु गरेका थिए । शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेपछि उनले एभरेष्ट बैंकबाट आफ्नो करिअर सुरु गरेका थिए । त्यहाँ चार वर्ष काम गरेपछि उनी ग्लोबल बैंकमा मेनेजर लेभलमा ४ वर्ष काम गरे । त्यसपछि आइएमईमा कार्यरत छन् । पहिला जनरल मेनेजरको रुपमा यो कम्पनीमा प्रवेश गरेका पोखरेल विगत ६ वर्षदेखि सीइओको जिम्मेवारीमा छन् । हाल उनी ग्लोबल आइएमई बैंकका संचालक समेत रहेका छन् ।
अहिले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल त्रसित बनाएको छ । यही चैत्र ११ गतेदेखि १८ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई नै लक डाउन गरेको छ । लक डाउनका कारण कुनै पनि व्यक्ति सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन र निस्कनु पनी हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा पनि नेपालका रेमिटेन्स् कम्पनीहरुले कसरी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएका रेमिटेन्स कम्पनीहरुले डिजिटल कारोबार सुचार गर्न सिमित आफ्ना केन्द्रीय कार्यालय खोलेर सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालय खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु भोग्नु परेको छ । नेपालमा रेमिटेन्सको वर्तमान अवस्था कस्तो छ । कर्मचारीहरुको कस्तो सुरक्षा विधि अपनाइएको छ र रेमिटेन्स नपाएका गुनासाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेका छन् नि । यिनै विषयमा केन्द्रित रही आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन (एनआरए)का अध्यक्ष समेत रहेका सुमन पोखरेलसंग सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानी ः
० पछिल्लो समय रेमिटेन्सको अवस्था कस्तो छ अध्यक्षज्यू ?
अहिले देश नै लकडाउनमा छ । विश्व नै कोरोना भाइरसको कारण रोइरहेको छ । हजारौंले ज्यान गुमाएका छन् । लाखौं कोरोनासंग संघर्ष गरिरहेका छन् । यो बेला पनि हामीले ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरेको अवस्था छ । रेमिटेन्स ठप्प जस्तै छ । फोन गरेर भुक्तानी दिएका छौं । नयाँ खासै कारोबार भएको छैन । अवस्था असहज नै छ । चाँडो यो सहज हुने विश्वास लिएका छौं ।
७५ प्रतिशत रेमिटेन्स घटेको छ । पहिला सहज अवस्था जस्तो छैन नि ।
० तपाई रेमिटेन्स कम्पनीहरुको छाता संस्था नेपाल रेमिटेन्स एसोशियसनको अध्यक्ष पनि हो । मलाई भनिदिनु होस यो संवेदनशिल अवस्थामा कसरी कस्तो सेवा दिनु भएके छ ।
मैले अगाडी नै भनि सके हामीले सदा झै सेवा दिन त कठिन छ । शाखा खोलेको छैन । देश लकडाउनको अवस्थामै छ तर, पनि हुन सक्नेसम्मका सेवा सबै रेमिटेन्स कम्पनीहरुले दिएका छन् । हामी आईएमईले त नगर्ने कुरै भएन, केही केन्द्रीय कार्यालय खुलेका छन् । शाखा प्राय सबै बन्द नै छन् । स्टाफहरुकै फोन नम्बरबाट कारोबार घरमै बसेर पनि गरेका छौं । प्रस्टै भन्दा फोन गरेर भुक्तानी दिएको अवस्था छ ।
० विदेशबाट पठाएको पैसा नपाएको गुनासो नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको समाचार आएका छन् नि के यो सत्य हो अध्यक्षज्यू ?
गुनासो पुगेको होइन, यस्तो बेला रेमिटेन्स लिन कसरी जाने, कहाँ जाने भन्ने बारे बुझेको हामीले सूचना पाएका छौं । हामीले यस्तो देश नै लकडाउन भएको र कोरोना भाइरस बिरुद्ध हामी पनि लडिरहेको अवस्थामा सकेसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । सबै तिर बन्द छ । तर, पनि हामीले दिने सेवा हामी जसरी पनि दिन्छौं ।
० आईएमई पे बाट कस्तो कारोबार भएको छ । नेपालीहरुको संख्या कति छ । नयाँ रुपमा ल्याउनु भएको देखिन्छ ?
नयाँ त होइन पूरानै आईएमई पे हो । यसलाई केही मोडिफाई गरेर ल्याएका छौं । कोरोना भाइरसका कारण यसमा कारोबार बढेको छ । डिजिटल कारोबारमै जोड दिने कुरा राष्ट्र बैंकको पनि छ । हामी मात्रै होइन यस्ता धेरै छन् । उनीहरुको पनि कारोबार बढेकै देखिन्छ ।
० तपाईहरुको संस्था नेपाल रेमिटेन्स एसोशियसनले राज्यद्वारा कोरोना भाइरस बिरुद्ध लड्ने कोषमा कस्तो सहयोग गर्नु भएको छ त?
हामीले यो बेला ग्राहकलाई सेवा दिने हो । राज्यको कोषमा केही संस्थाहरुले दिएका पनि छन् । हामीले पनि यसबारेमा छलफल गर्ने छौं । आईएमई ग्रुपले भूकम्पको बेला ठूलो धनराशी सरकारलाई दिएकै हो । हामी सरकारसंगै छौं । राज्यलाई यो बेला सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ नि ।
० विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको हजारौंकै ज्यान दिएको लाखौलाई आक्रमण गरेको कोरोना भाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चाहि कस्तो असर पार्ने देख्नु भएको छ ?
अहिले रेमिटेन्स ७५ प्रतिशत भन्दा बढि घटेको छ । पहिला जस्तो छैन । साच्चै भन्ने हो भने हाम्रो देश रेमिटेन्सबाट चलेको छ । भन्दा फरक नपर्ला । त्यसकारण विश्व बजारको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको बेला हामीलाई पनि ठूलो असर पर्ने प्रस्तै देखिन्छ । १ महिना भन्दा बढि लकडाउन लम्बिए हाम्रो अर्थतन्त्र तग्रिन लामो समय लाग्ने देखिन्छ । पहिला त बच्नु प¥यो । बचाउनु प¥यो । अनि मात्रै अरु कुरा आउने हुन् । त्यसकारण समय र परिस्थितिलाई ख्याल गर्नु पर्दछ ।
०विदेशबाट पैसा आउने क्रम अहिले पनि जारी छ त ?
कमै मात्रामा आएको छ । रेमिटेन्स आउने मुलुक खाडी, यूरोप र अमेरिका अहिले कोरोना भाइरसबाट त्रसित मात्रै छैन । रोईरहेको पनि छन् । हजारौ मरेका छन् । लाखौं विरामी छन् । यो बेलामा कम रेमिटेन्स नगन्य मात्रामा आएको छ ।
० लकडाउनको बेलामा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्वास्थबारे कति सचेत रहनु भएको छ ?
कर्मचारी हाम्रो सम्पत्ती हुन् । हाम्रो पहिलो दायित्व उहाँहरुको स्वास्थकै हुन्छ । हामीले कर्मचारीहरुलाई सेनिटाईजर, माक्स र पञ्जाको पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौं । टाढाबाट कारोबार गर्न भनेका छौं ।
० विश्पव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल अहिले लकडाउनमा छ । यो लम्बिने प्रस्टै देखिन्छ । यसको तयारी चाहि कस्तो गर्नु भएको छ त अध्यक्षज्यू ?
महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । यो संक्रमणसंग आज संसारका कुनै पनि देशहरुले पूर्व तयारी गरेका थिएनन् । हामी भन्दा ठूला शक्तिशाली राष्ट्रहरुले आज उनीहरु पनि रोईरहेको अवस्था छ । यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो मात्रामा क्षती पु¥याएको छ । त्यसकारण हामी नेपालीहरुले यसबाट पाठ सिक्दै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो हामी सबै मिलेर गर्नु पर्छ ।
० अन्यमा लाखौं ग्राहक र नेपाली जनतालाई केही भन्नु छ ?
हामी हाम्रा ग्राहकलाई सेवा दिने कुरामा कन्जुसी गर्दनौ । घरबाटै सेवा दिएका छौं । स्टाफहरुको फोन नम्बरहरु दिएका छौं । केही कार्यालय खोलेका पनि छौं । त्यहाँबाट पनि सेवा दिएका छौं । सचेत रहनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् । घरबाट बाहिर पटक्कै ननिस्कनुहोस् । राज्यलाई सहयोग गर्नुहोस् । भन्नु चाहान्छु ।